Halkuu yaallaa Tiishkii lagu qoray heshiiskii ugu horreeyay ee Lionel Messi la galay Barcelona? – Gool FM
Halkuu yaallaa Tiishkii lagu qoray heshiiskii ugu horreeyay ee Lionel Messi la galay Barcelona?
(Barcelona) 16 Abril 2020. Muran la’aan Lionel Messi waxaa ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa taariikhda kooxda Barcelona, balse safarka dheer ee uu darajadaas ku soo gaaray ayaa ka soo bilawday heshiis aan warqad lagu saxiixin.
Bishii September ee sanadkii 2000, waxaa dalka Spain soo gaaray Messi oo 13-jir ah iyo qoyskiisa, waxaana safarkooda uu u qorsheysnaa inay la xaajoodaan Barca agaasimaheedii xilligaas Carlos Rexach kaasoo si dhaqsi leh u doonayay saxiixa wiilkan da’da yar.
Horacio Gaggioli oo ahaa shaqsigii xilligaas doonayay inuu Messi u gacan galiyo Barcelona ayaa damcay inuu Real Madrid u weeciyo kaddib markii qaar ka mid ah maamulka sare ee Barca ay shaki badan galiyeen saxiixaas iyo tayadiisa.
Saddex bilood, bishii 14-kii December ayay markale ku kulmeen Gaggioli iyo Rexach halka lagu magacaabo Pompeia del Montjuic, waxaana sidoo kale kulanka qayb ka ahaa wakiilkii xilligaas ciyaaryahanka ee Josep Maria Minguella.
Kulankaas ayaa lagu gaaray heshiiskii Barcelona ay kula saxiixatay Lionel Messi, waxaana Rexach oo doonayay inuusan waqti ka lumen uu heshiiska ku dul qoray Tiish (Mandiil) iyadoo qof walbana uu saxiixay.
“Barcelona, December 14, 2000, iyadoo ay goob joog yihiin Messrs Minguella iyo Horacio, Carlos Rexach oo ah xoghayaha farsamada kooxda Barcelona waxa uu qaaday masuuliyadda saxiixa Lionel Messi inkastoo ay jiraan fikrado ka soo horjeeda, haddana heshiiska waan isku raacnay.”
Heshiiskii mandiilka lagu qoray waxa uu noqday dukumiinti si rasmi ah loo soo bandhigay toddobaad kaddib markii la saxiixay.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa hadda Tiishkaas/mandiilkaas uu ku jiraa gacanta Gaggioli oo ku kaydiyay banki wax lagu kaydiyo oo ku yaalla Andora.
Balse Gaggioli waxa uu qabaa in mandiilkaas la dhigo madxafka kooxda Barcelona ee ku yaalla garoonka Camp Nou.